VIAMO : vahaolana maharitra amin’ny fandrindrana ny fotoam-pambolena sy ny fikorotanan’ny rotsak’orana – Depeche TARATRA
Accueil/Economie/VIAMO : vahaolana maharitra amin’ny fandrindrana ny fotoam-pambolena sy ny fikorotanan’ny rotsak’orana
VIAMO : vahaolana maharitra amin’ny fandrindrana ny fotoam-pambolena sy ny fikorotanan’ny rotsak’orana
Lendremakely Rabezeroma il y a 1 semaine
De gauche à droite, Guillaume Sauval, Dir pays VIAMO, Raharinomena Fanja, SG MAEP,; Pr Razafinjara Lala Aimé, DG FOFIFA
Mihena amin’ny ampahany betsaka ny ahiahy, ny tebiteby, ny sorisory vokatry ny fikorontanan’ny toetr’andro eo amin’ireo mpamboly vokatry ny fanampiana eo amin’ny tolotra VIAMO. Tafapetraka io tolotra io, vokatry ny fiaraha miasa teo amin’ny ministera misahana ny fambolena, ny FOFIFA, ny sampandraharaha misahana ny famatarana ny toetr’andro, ny fiaraha miasa eo amin’ny allemanina sy ny vondrona eropeanina.
Ampy ve ny rotsak’orana, be loatra ve, ara-potoana ve sa tara? Fantatra avy amin’ny finday avy hatrany ny mikasika ireo, tsotra, mora ampiasana, afaka sitrahan’ny rehetra satria tsy andoavam-bola, na misy ihany fa tena mirary. Azo fantarina amin’ny fotoana rehetra, n’aiza n’aiza, finday farany izay tsotra dia afaka hidirana amin’ny tolotra; manaraka ireo toro-marika voalaza rehefa avy miantso ny laharana 321; re avokoa avy eo ireo toro lalàna mikasika ny tiana ho fantarina.
Tsy voatery maminavina arahina tebiteby sy ahiahy intsony ny toetr’andro ilain’ny mpamboly. Afaka alaharin”’izy ireo araka ny zava misy ny fotoana hanombohan’izy ireo ny-fambolena. Voly miisa 5 no voakasi’izao fomba raitra sy vaovao izao : vary na an’tanimbary na an-tanety, katsaka, tsaramaso, voanjo ary sakamalaho na sakay tany.
Manampy tanteraka ny fanapahan’kevitra tena ilaina ny fidirana amin’ny tolotra VIAMO; miandry kely raha somary tara ny rotsa-korana, haroso raha lasa mialoha, mihomana amin’ny ho mety fisian’ny tondra-drano raha be loatra, mijery ny fepetra ilaina raha tsy ampy. Tsy mbola manana atotan’isa mazava afahana mandrefy sy manombana ny fiatraikan’ity tolotra vaovao ity ny tompon’andraikitra nefa kosa ny fahitana fa efa tafiakatra 1,3 hetsy mahery ireo antso tamin’ny laharana 321 , izany hoe eo amin’ny salan’isa 11.000 antso isak’herinandro eo hatramin’izay 2 taona nanombohana izay dia efa manambara fa efa zatra sy manavanana ireo tantsaha mpamboly ny tolotra ao anatiny ary azo hitarafana fa mahomby izany.
Ny fanadiadiana natao milaza koa fa ny 59,8% n’ireo nanontaniana dia nanambara ny fahafam-pony.
Niatomboka ara-pomba ofisialy ny tamin’taona 2019 ny tolotra VIAMO. Niatomboka tamin’izay dia natao ho isan-taona ny famoahana ny “calendrier culturaux” izay azo fantarina avy amiin’io tolotra VIAMO io ka ahafahan’ny rehetra, tsy ny mpamboly ihany, mijery ny vinavina izay ho mety toetr’andro.
Azo fantarina sy renesina ao ny fotoam-pambolena misy eto Madagasikara isam-paritra sy isaky ny voly. Tolotra miisa 9 no afaka renesina ao anatin’izy ity, ankoatra ny fotoam-pambolena, ao ny fampitam-baovao maro samy hafa tafiditra amin’izany hatramin’ny ara-pahasalamana (COVID-19, fanabehazan’aizana).
Hisy aretina vaovao hipoitra manerana an'izao tontolo izao : tsy maintsy arovana ireo zava-maniry mitsabo eto Mdagasikara
Inspection des conditions de travail au niveau des entreprises de la filière coton
STAC: renforcement de capacité des cadres et des membres
Air Madagascar : 70 millions de dollars de perte avant la crise sanitaire
Relance économique : le GEM prévoit la reprise du dialogue public-privé
Employabilité des jeunes : le Projet Jeunesse malgache compétente au travail (JMCT) continue son parcours.
Kavin’omby miisa 5 alina no hapetraka hatramin’ny faran’ny taona any Atsimo
AFD : 3,2 milliards d’ariary pour appuyer le développement de Madagascar
Fambolem-bary : rano 56 metatra toratelo no hanondrahana ny lemak’Antananarivo.